Kedu ihe na etu esi akwụ ụgwọ ecommerce? ECommerce ozi ọma
Kedu ihe na etu esi akwụ ụgwọ ecommerce?
O doro anya na ị nwetala dị ka onye ahịa na ụlọ ahịa elektrọnik, n'oge dị iche iche ma ugbu a ị bụ onye nwe otu n'ime ha, ị na-eche etu ị ga - esi melite ahụmịhe nke ndị ahịa gị na saịtị gị.
Onye ahịa nwere afọ ojuju bụ onye nwere nchebe maka nleta na ịzụrụ ihe n'ọdịnihu, uru nke mmebawanye site na netwọkụ mmekọrịta ma ọ bụ okwu ọnụ.
Mgbe onye ahịa batara n’ime ụlọ ahịa, ha na-atụ anya ịchọta ya kensinammuo igodo nke saịtị, a doro anya imewe nke ahụ anaghị ebute ọgbaghara, nhọrọ búsqueda na ihe enyemaka ndi ozo ma obu ndi ozo nke g’eme ka ha noro na peeji gi ma laghachite.
Ọ bụrụ na ụlọ ahịa gị bụ ebe dị nchebe, yana ezigbo igodo yana ngwa nwere nke na-enyere onye ahịa gị aka na mkpebi ha gbasara ngwaahịa na n'ikpeazụ zụrụ ha, ị gaghị echefu ọrụ kpakpando nke doro anya na ụzọ ịkwụ ụgwọ.
1 Gịnị bụ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ahụ?
1.1 Ọrụ nke ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị mfe:
2 Ahụmịhe ndị ahịa mgbe ị na-akwụ ụgwọ
3 Kedu ka m ga - esi meziwanye ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ?
4 Uru na ọghọm nke ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ
Gịnị bụ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ahụ?
La ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ bụ ọrụ nke etinyere na ụlọ ahịa kọmputa, iji mee ka ọ dịrị ndị ahịa mfe ịkwụ ụgwọ. Dabere na ụzọ ịkwụ ụgwọ ị na-eji na ụlọ ahịa gị, ị ga-enweta ahụmịhe ka mma ma ọ bụ nke ka njọ maka ndị ahịa gị mgbe a bịara n'ịkwụ ụgwọ.
N’ụzọ doro anya, ihe ịchọrọ bụ ka ndị ahịa gị chọgharịa, kpọtụrụ ma zụta n’ụzọ dị ntụsara, ọsọ ọsọ na nchekwa ma ọ bụrụ na ịkwụ ụgwọ ị chọghị ka ogo belata. Ọ bụ ihe na-abaghị uru inwe imewe kacha mma ma ọ bụ kacha chọọ ngwaahịa, ma ọ bụrụ na mgbe onye ahịa gị chọrọ ịkwụ ụgwọ maka ọdịnaya ha na ụgbọ ibu azụmahịa, ihe niile na-adị mgbagwoju anya na ihe ha enweghị ike ma ọ bụ na-amaghị etu esi akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na anyị nyochaa ahụmahụ nke otu narị otu narị e-shop ahịa mgbe ị na-akwụ ụgwọ, anyị na-enweta usoro nke ndụmọdụ na ndụmọdụ ga-eme ka ụlọ ahịa gị bụrụ ebe kachasị mma mgbe ị na-akwụ ụgwọ ahụ, na-ezere mmejọ nke saịtị ndị ọzọ na-eme site n'ịghọtaghị onye ahịa ahụ.
Ọrụ nke ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ dị mfe:
Mgbe onye ahịa ahụ mechara zụọ ahịa ma kwụọ ụgwọ, ọ na-eji nọmba debit ma ọ bụ nọmba kaadị akwụmụgwọ wee tinye data ya na oghere nke ikpo okwu rịọrọ.
El Nchọgharị nke onye ahịa ahụ na-ezipụ data ka iziga ya n'ụlọ ahịa ebe ọ zụrụ. Ihe ezoro ezo na-eziga data echedoro ka ndị ọzọ ghara "zoo" ya wee gụọ ya. Iji zoo data ahụ, a na-eji usoro SSL (Secure Socket Layer) ma ọ bụ TLS (Transport Layer Security).
Ugbu a etinyela data ndị ahịa n'ime usoro ịkwụ ụgwọ ụlọ ahịa, nke ezoro ezo ma nwee nchedo.
Paymentkwụ ụgwọ n'elu ikpo okwu kpọtụrụ ndị n'elu ikpo okwu bank ma nye gị nkọwa nke kaadị ndị ahịa.
Banklọ akụ, n'aka nke ya, na-ebunye ozi ahụ na ahịa lekwasịrị anya n'elu ikpo okwu, iji nyochaa na data ziri ezi na iji mezuo ikike.
Banklọ akụ nke ndị ahịa na-enyocha data ahụ ma, ọ bụrụ na ha ziri ezi, na-eziga ikike na ụlọ ahịa nke ụlọ ahịa yana ozi akwadoro. Ọ bụrụ na ụlọ akụ nke ndị ahịa anaghị akwado ọrụ ahụ, ọ na-ezigakwa ozi na ihe kpatara ya, dịka ọmụmaatụ "enweghị egoNanjikọ adịghị".
Agbanyeghị na ilele gị anya nke mbụ, ọ ga - adị ka ọrụ dị mgbagwoju anya, ọ na - ewe naanị sekọnd ole na ole ruo mgbe nyiwe niile ga - ekwurịta okwu yana ụlọ akụ ndị ahịa na - ezipụ ozi ahụ ma ọ bụ jụ ọrụ ahụ.
Ahụmịhe ndị ahịa mgbe ị na-akwụ ụgwọ
Ọ bụrụ na anyị eburu n'uche ọchịchọ nke ndị ahịa anyị mgbe anyị na-ahọrọ ngwaahịa ndị anyị na-ere, anyị na-ege ha ntị mgbe ha na-akatọ agba agba nke atụmatụ anyị ma ọ bụ nye anyị ndụmọdụ ka anyị gbanwee ụlọ ahịa ahụ, anyị agaghị eleghara akụkụ kachasị mkpa dị mkpa niile: ugwo.
Onye ahịa ahụ dị njikere mgbe niile kọọ ahụmahụ gị Mgbe ị gụchara saịtị ma ọ bụrụ na anyị achịkọta nsogbu ị nwere na oge ị gara ma n'etiti ha bụ ihe isi ike mgbe ị na-eji usoro ịkwụ ụgwọ, ọ bụghị ihe dị mma.
Onye ahịa m ewepụla oge ọ na-ekpebi ihe ọ chọrọ ịzụ n’aka m, ọ buru ya n’ụgbọala ya ma ọ bụ nkata ịzụ ahịa, ọ mepụtara akaụntụ ya wee kwadobe ịkwụ ụgwọ mana ... ọ gaghị ekwe omume maka ihe dị iche iche. Kedu ihe onye ahịa m ga-eme? N'ezie, ihe ị na-eche, ga-ahapụ ụlọ ahịa m na-enweghị azụta yana yana ahụmịhe ọjọọ nke ọ ga-enwe obi ụtọ ịkọrọ onye ọ bụla chọrọ ige ya ntị.
Ya mere, o doro anya na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na-adịghị mma na ụlọ ahịa anyị bụ ihe na-ekpebi ihe na nke ahụ etinye aka ozugbo na ahịa dara ogbenye nke ụlọ ahịa anyị.
Badfọdụ ahụmahụ ndị ahịa dị njọ mgbe a bịara maka ndenye ọpụpụ kwesịrị ịhapụ gị ka ụlọ ahịa gị ghara ime otu ihe ahụ. Ka anyị lelee ụfọdụ nsogbu ndị ahịa gosipụtara mgbe ị na-eji ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ:
"O yiri m ka ekwetaghị na ụlọ ahịa eletrọniki enweghị nhọrọ ịkwụ ụgwọ site na PayPal. "
“Mgbe m na-achọ ịkwụ ụgwọ site na kaadị, ọ na-eweghachi ozi ezighi ezi ma ejiri m ọtụtụ kaadị nwalee ya. Gaghị egbusi oge ọ bụla ọzọ n'ịkwụ ụgwọ. "
"Uzo ịkwụ ụgwọ ahụ yighị m ntụkwasị obi, ọ nwere atụmatụ m hụbeghi ma atụkwaghị m obi oke."
Mgbe m họọrọ usoro ịkwụ ụgwọ, ọ na-eziga m na peeji nke na-abụghị ụlọ ahịa ahụ ma ọ bụrụ na m mara ọkwa na anaghị m atụkwasị ya obi."
Kedu ka m ga - esi meziwanye ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ?
Anyị adịlarị njikere na anyị chọrọ ka ndị ahịa anyị nwee ọmarịcha njem na ụlọ ahịa anyị, site na mbido ịhọrọ ngwaahịa, nyocha, ịjụ ajụjụ ma mesịa kwụọ ụgwọ. Ugbu a, ọ fọdụrụ iji mezuo ya.
Mbụ ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ọnụahịa ịkwụ ụgwọ gị nwere nke ọ bụla n'ime njehie ndị a:
Adighi egosi obi ike
O siri ike ma ọ bụ dị mgbagwoju anya iji
Pụtara na-abụghị ebe ma ọ bụ emezighituri e mere ma ọ bụ
Gbanwee peeji ndị ọzọ na-enweghị onye ahịa avian
Naanị otu n'ime okwu ikpe ndị a ga-abụ ihe kpatara iji gbanwee ihe, ọ bụrụgodi, ị hụrụ njehie niile na ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ gị, o doro anya na ndị ahịa gị na-ahapụ ụlọ ahịa gị na-atụ egwu ... na-enweghị ịzụta.
Ọ dị oke mkpa ka ịme ihe ma melite ụzọ ịkwụ ụgwọ gị. Ka ndị ahịa gị ghara ịtụkwasị obi ma mee ka ịkwụ ụgwọ ha nwee ntụkwasị obi na-enweghị ịdọrọ ntutu ha, ị ga-emerịrị ihe:
FIRST_ FLỌ PLỌ FLỌ EZIN FLỌ. A ghaghị ịnye ụzọ ịkwụ ụgwọ kachasị dịkarịsịrị, na-eji akara ngosi amara ama (Visa, Mastercard ...), ka ị ghara iduhie onye ahịa ahụ. Mgbe ị na-akwụ ụgwọ ma ị hụ ngwa ngwa nke kaadị gị, ọ dị gị ka amata gị na ịnọghị ebe.
OZI OZI SECOND_ REDIRECTION. Ọ bụrụ na ị họrọla nhọrọ ịkwụ ụgwọ nke a na-eziga gị ozugbo na ibe ma ọ bụ nkesa nke onye na-enye ego ahụ (dị ka PayPal), ọ dị mkpa ka ị gwa onye ahịa gị nke a ozi na-eme ka ha mara. I kwesịrị ịma na iji mezue azụmahịa ịkwụ ụgwọ, ị ga-aga na ibe ọzọ na mpụga ụlọ ahịa gị, mana na ọ dị mma. Mgbe ị na-eji usoro ịkwụ ụgwọ na-eziga onye ahịa gị ibe ha, dị ka PayPal, ọ na-abụkarị ntụkwasị obi ọzọ maka onye ahịa ahụ, ebe ọ bụ peeji ịkwụ ụgwọ a ma ama.
AKW LKWỌ AKWUREKWỌ AKWUREKWỌ AKWKWỌ AKWKWỌ AKWIRKWỌ. Mgbe ị jiri akara na onye ahịa pịa na ya iji kwụọ ụgwọ, ọ ga-abụrịrị njikọ nwere nchekwa yana akwụkwọ SSL. Naanị ị ga-azụta akwụkwọ SSL ma wụnye ya na ụlọ ahịa gị iji hụ na azụmahịa ịkwụ ụgwọ maka ndị ahịa gị.
Uru na ọghọm nke ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ
Dị ka anyị kwurula na mbụ, na mgbe ụfọdụ anyị na-eji usoro ịkwụ ụgwọ dịka PayPal, nke ahụ jiri ibe ya kwụọ ụgwọ, yabụ a ga-amanye onye ahịa ahụ ịhapụ ụlọ ahịa nke ọ na-azụ, ka nwee ike ịkwụ ụgwọ. Ọ dị mkpa ịgwa onye ahịa ahụ mgbe niile na ọ ga-ahapụ ụlọ ahịa gị ka ọ banye ọzọ, mana ị ga-agwa ya mgbe niile na azụmahịa niile dị nchebe 100%.
N'otu aka, ọ bụ ezigbo nchekwa, n'ihi na ị na-ezere itinye asambodo nchekwa ebe ọ bụ na usoro ịkwụ ụgwọ n'onwe ya nwere ha. Na-ezere onye ahịa ịbanye na data nke onwe ha na nke ịkwụ ụgwọ ha, ebe ọ bụ na ejirila ụgwọ ma ọ bụ kaadị akwụmụgwọ ha na usoro ịkwụ ụgwọ.
Kọ ihe ụfọdụ nke atọ ịkwụ ụgwọ gateways:
Ọ bụghị ndị ahịa niile ji obi ha anabata Hapụ otu peeji iji tinye ọzọ ma kwụọ ụgwọ, ọbụlagodi na amaara ya nke ọma.
Ọ dị ịtụnanya iziga ndị ahịa gị ịkwụ ụgwọ ebe ọzọ ewezuga ụlọ ahịa gị.
Uru nke ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ:
Mgbe ikpo okwu ị na-eji ka ndị ahịa gị nwee ike ịkwụ ụgwọ na ụlọ ahịa gị, ọ bụ mara dị ka PayPal, Google Wallet ma ọ bụ Stripe, onye ahịa na-enwe mmetụta nke ọma karịa.
Na ụfọdụ na-eme ihe, ịkwụ ụgwọ site na nyiwe ndị ọzọ, bụ ịkwụ ụgwọ a ghọtara nke ọma na ntụkwasị obi. Ọ bụrụ na ị ga-eresị gị mba ndị ọzọ, chọpụta ma ha tụlere nyiwe ndị a karịa nke ụlọ ahịa ahụ.
Ole obere ihuenyo mee ka onye ahịa ahụ gagharịa, nke ka mma. Site n'iziga ha na ikpo okwu ọzọ iji kwụọ ụgwọ, ị na-eme ka usoro niile dị mfe.
Na-ezere onye ahịa ogologo usoro nke ndebanye na ntinye nke data nke ahụ nwere ike ime ka ha chee echiche ugboro abụọ maka ịga ahịa na ụlọ ahịa gị.
Mmechi: Akụkụ dị mkpa na ahụmịhe onye ọrụ nke ụlọ ahịa gị, bụ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ, mụọ nke ọma ụzọ iji mee ihe, ma na-enye ozi na usoro na ngwa ngwa, na ọnụego gị nke ụgbọ ala ịzụ ahịa gbapụrụ ga-ebelata, yana afọ ojuju ndị ahịa gị ga-abawanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Ụzọ ịkwụ ụgwọ » Kedu ihe na etu esi akwụ ụgwọ ecommerce?
Mgbe m mejuputara ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ Cardinity na ụlọ ahịa m n'ịntanetị, ahụrụ m mmụba ngwa ngwa na ahịa n'ihi na ndị ahịa m nwere ohere iji kredit ma ọ bụ kaadị debit kwụọ ụgwọ.
Ọnye na -bụ Luis Carrasco Guillén? dijo
Ana m ekele gị nke ukwuu maka ozi ahụ. Enwere m mgbagwoju anya n'etiti ihe bụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na ihe a na-akwụ ụgwọ. Okwu bịara doo m anya nke ọma.
Zaghachi Luis Carrasco Guillén
Manuel Rodriguez kwuru dijo
Iji mepụta ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ ọhụrụ, m ga-etinye ya na sistemụ usoro ịkwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ? Ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ?
nke a obu usoro di mfe ka obu na o di mgbagwoju anya, na guatemala?
ha na-enyere m aka
Zaghachi Manuel Rodriguez
Daalụ nke ukwuu maka ozi magburu onwe ya.
Zaghachi antonio jaramillo
Fernando Carna kwuru dijo
Ozi magburu onwe ya
Zaghachi Fernando Carna
Pịa, ngwa nyocha dị ike maka Ecommerce
Otu esi asọmpi megide ndị na-ere ahịa azụmaahịa buru ibu